Google wuxuu tirtirayaa xadidaada tirada aaladaha aysan shahaado kaheyn shirkada | Androidsis
Qolka Ignatius | | Aaladaha Android, Noticias
Dhamaadkii bishii hore, raggii ka socday Mountain View waxay ku dhawaaqeen in dhammaan aaladaha adeegsada Play Store iyo Adeegyada Google Play oo aan shahaado ka haysan Google, mar dambe ma awoodi doonaan inay adeegsadaan barnaamijyada iyo adeegyada Google. Sidan oo kale, shirkadda mashiinka raadinta waxay dooneysay inay ka hortagto soo saarayaasha qalabka ee uusan Google ka ansixin adeegsiga adeegyadeeda.
Si aad u awoodo inaad adeegsato barnaamijyada iyo adeegyada Google, shirkadda ayaa ogolaatay in aaladdaas la diiwaan geliyo iyada oo loo marayo geeddi-socod adag, maaddaama bogga internet-ka si loo awoodo uusan na siinin macluumaad ku saabsan sida loo sameeyo. Waxay sidoo kale sameysay xadka 100 qalab oo aan isku diiwaan gelin karno isla ID-ka Google.
Tan iyo hadda, Google waxay ku sameysay tiro badan oo horumar ah howshan iyo si kadis ah, laba ka mid ah shuruudihii ay Google soo rogtay ayaa laga saaray inuu isdiiwaangaliyo. Marka ugu horeysa waxaa laga helaa tirada aaladaha aan iska diiwaan gelin karno aqoonsigeenna Google, iyadoo laga takhalusiyo xaddidaadda 100 qalab. Ta labaad, Google waxay hadda aqbashay Qaabdhismeedka Adeegga Google (GSF ID) si markaa aynaan mar dambe ugu beddelayn qaab tobanle.
Fulinta hawsha hadda way fududahay. Waa inaan kaliya ka soo dejiso barnaamijka Aqoonsiga Aaladda Play Store si loo helo Aqoonsiga GSF ee qalabkeena. Marka xigta waa inaan ku dhajino sanduuqa aan ka heli doonno boggan oo guji diiwaanka. Intaasi waa intaas.
Laakiin haddii aadan marin u lahayn Play Store illaa aad ka diiwaangeliso qalabka, waad soo dejisan kartaa barnaamijka iyada oo loo marayo xiriiriyahan illaa APKMirror, oo booqo bogga lagu tilmaamay tuduca hore. Marka hawshu dhammaato, waxaad awoodi doontaa inaad rakibato Adeegyada Google Play marka lagu daro Play Store oo aad ku shaqeyso iyadoon xaddidnayn oo Google ay ka saartay gacanteeda dhowr toddobaad ka hor.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Google waxay ka saareysaa xaddidaadda tirada aaladaha aysan shahaado ka haysan shirkadda